အခြား magnetron sputtering ပစ်မှတ်ပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, cylindrical နှင့် planar magnetron sputtering ပစ်မှတ်များသည်စတုဂံပြားပစ်မှတ်များအတွက်ကောင်းသောအပေါ်ယံပိုင်းတူညီမှု၏အားသာချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသည်, အောက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခုအသုံးပြုမှုနှုန်းမှတဆင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုအများဆုံးတိုးနိုင်သည်:
(1) ဟိုနှစ်ဖွဲ့ (လေး) ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိလက်စွပ်ပုံသဏ္pန်ကျင်းများသည်အချို့အတိမ်အနက်သို့ရောက်ရှိသည်, ပစ်မှတ် core (သံလိုက်အပိုင်း) ပစ်မှတ်ပြွန်နှင့် ၄၅ ဒီဂရီနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်, ထို့ကြောင့်မဆွေးမြေ့သေးသောပစ်မှတ်ပြွန်ရှိအခြားနေရာများကိုသုံးနိုင်သည်
(2) cylindrical နှင့် planar magnetron sputtering ပစ်မှတ်၏အဓိကပစ်မှတ်ကို rotating target core အဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်သောအခါ, (sputtering အတွင်းပစ်မှတ် core သည်လည်ပတ်နေသည်), ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ကိုတစ်လွှာပြီးတစ်လွှာအလွှာဖြန်းနိုင်သည်, ပြီးတော့တွင်းတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး. အခုအချိန်တွင်, ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုအထိရောက်ဆုံးအသုံးပြုလိမ့်မည်, နှင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏အသုံးချမှုနှုန်းကိုရောက်နိုင်သည် 50% သို့ 60%. ပစ်မှတ်ထားသည့်ပစ္စည်းသည်အဖိုးတန်သတ္တုပစ္စည်းဖြစ်သည်, ဤအရာသည်အလွန်အရေးပါသည်မှာသေချာသည်။.
သံလိုက်စက်ကွင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် coaxial cylindrical magnetron sputtering ပစ်မှတ်၌သံလိုက်နှင့်ဖိနပ်၏နိယာမကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်, rectangular planar ပစ်မှတ်ကို cylindrical အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, planar magnetron sputtering ပစ်မှတ်, ကောင်းသောတူညီမှုရှိလျှင်စတုဂံပုံပျံပျံပစ်မှတ်၏အပေါ်ယံကိုထိန်းသိမ်းထားသည်, ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏အသုံးချမှုနှုန်းကိုအများဆုံးမြှင့်တင်နိုင်သည်, သို့မှသာစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကိုတိုးတက်စေမည်.
နောက်တစ်ခု: စာဝှက်ပါ, လေ ၀ င်လေထွက်အားဖြင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုအသုံးချခြင်း